रवि लामिछानेका दुई चुनौती : पत्रकारले पुग्दैन, नेता बन्न गाह्रो छ | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← नसुल्झेको रुम नम्बर २०२ को गुत्थी
अब कांग्रेस भातृसंस्थाको विघटन कि अधिवेशन ? →
रवि लामिछानेका दुई चुनौती : पत्रकारले पुग्दैन, नेता बन्न गाह्रो छ
Posted on 28/08/2019 by कुवेतनेपाल एडमिन | टिप्पणी छोड्नुहोस्
क्षणिक लोकप्रियतामा बहकिएर राजनीतिक विकल्प दिन सकिँदैन
रवि लामिछाने अहिले जनताको अख्तियारको प्रतिनिधिपात्र जस्तो हुनुभएको छ । बालुवाटारको अख्तियारचाहिँ सीमित मान्छेहरुका लागि मात्रै छ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा अन्याय परेका सामान्य मान्छेले अहिले रवि लामिछानेको नाम पहिला लिने अवस्थाको उहाँले छवि बनाइदिनुभयो । पत्रकारिताभन्दा निकै पर पुगेर एकदम भुइँ तहका जनताको सदभाव जित्ने रवि लामिछानेको पृष्ठभूमि बनेको छ । अनि, समाजमा बढ्दै गएको आक्रोश र निराशा मिल्दाखेरि रवि लामिछानेको पक्षमा देखिएको उभार हो यो ।
पत्रकारकै रुपमा रहने हो भने अब रवि लामिछानेमा ‘लिमिटेसन’ देखिनेछ । मलाई के लाग्छ भने जुन मास चितवनमा देखियो, यो उहाँप्रतिको सदभाव हो । राज्य संयन्त्रप्रति आम मान्छेको पूर्ण भरोसा छैन । त्यसैले अब समाजले रवि लामिछानेजीलाई जुन सदभाव र अपेक्षा राखेको छ, अब मलाई के लाग्छ भने रवि लामिछानेलाई पत्रकारका रुपमा मात्रै आफूलाई निरन्तरता दिन एउटा नयाँ चुनौती थपिएको छ ।
यो १०/१५ दिनको परिघटनाले अब रवि लामिछानेबाट समाजले अपेक्षा गरेको एउटा पत्रकारको भूमिकाभन्दा धेरै बढी छ । समाज रुपान्तरककै रुपमा रवि लामिछाने आएको जस्तो गरेर उहाँप्रति मानिसहरुको अपेक्षा ह्वात्तै बढिदियो । उहाँको छवि पनि देशव्यापी रुपमा भयो । अब यो किसिमको अपेक्षा उहाँले एउटा टेलिभिजनको कार्यक्रममात्रै चलाएर मात्र पूरा गर्न सजिलो छैन ।
उहाँलाई अब स्पटलाइट पनि धेरै पर्छ । अहिलेसम्म उहाँ टेलिभिजनको कार्यक्रम प्रस्तोतामात्रै हुनुहुन्थ्यो, अब त धेरै ठूलो सार्वजनिक व्यक्तित्व भइसक्नुभयो । जनताले सदभाव पनि देखाएका छन्, अपेक्षा पनि गरेका छन् । त्यो भएको हुनाले अब उहाँले मर्यादित पत्रकारको सीमामा मात्रै बसेर जनताको आकांक्षालाई सम्वोधन गर्न त्यति सहज नहोला ।
राजनीतिको टोपी लगाएपछि फ्यानहरु गेटभित्र छिर्दैनन्
हाम्रो साझा पार्टीका नेता रविन्द्र मिश्रजीको कुरा गर्ने हो भने समाज सेवामा, बीसीसी रेडियोमा उहाँ एकजना स्टार पत्रकार हुनुहुन्थ्यो । सेलिब्रेटी पत्रकार हुनुहुन्थ्यो । उहाँको प्रभाव क्षेत्र बीबीसी सुन्ने र वौद्धिक समुदायको वीचमा थियो ।
हाम्रो अनुभव के छ भने रविन्द्र मिश्रजी पत्रकारका रुपमा, कविका रुपमा वा परोपकारी समाजसेवीका रुपमा मोफसलका जिल्लामा जाँदा मानिसहरुले ५ सय रुपैयाँको टिकट किनेर उहाँका कविता सुन्थे । कविता सुन्नलाई हजारौं मान्छे आउँथे । अहिले हामीले देशको राजनीतिको चर्चा कतिपय अवस्थामा पार्टीको ब्यानरमा पनि नगर्ने भनेर नागरिक अन्तरक्रिया गर्दा पनि राजनीतिक पार्टी भन्नेवित्तिकै उहाँकै फ्यान भएर बसेको मान्छे पनि गेटबाट भित्र छिर्न संकोच मान्छन् ।
त्यसैले मलाई के लाग्छ भने रवि लामिछानेजीको अबको चुनौती चाहिँ के हुन्छ भने जनताले उहाँबाट अपेक्षा गरेको र हस्तक्षेपको तहचाहिँ पत्रकारको घेराबाट निस्केर राजनीतिक हस्तक्षेपको अपेक्षा गरेको छ । उहाँले अब राजनीतिमा ट्रान्सफर हुनलाई ग्राउण्डचाहिँ उर्बर नै छ । तर, त्यो ट्रान्जिसन उहाँले कति कुशलतापूर्वक पार गर्नुहोला ? यदि उहाँले चाहनुभएको हो भने ।
यसमा हाम्रो अनुभव के छ भने नेपाली समाज र राजनीतिको रेस्पोन्स प्रतिक्रियात्मक मात्रै रहेछ । भइरहेको सिस्टमलाई विरोध गर्ने र भइरहेको विसंगतिलाई विरोध गर्नेमा चाहिँ आक्रोशका साथ मानिसहरु सहजै गोलबन्द हुने, तर प्रोएक्टिभ अवस्थामा जानेबेलामा नआउने ।
हाम्रो साझा पार्टीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले पनि हामीले के भनेर आफूलाई पेश गरेका छौं भने हामी यो विसंगति र कमजोरीको प्रतिक्रिया मात्र व्यक्त गर्ने होइन, यसको रुपान्तरणको पनि हामीसँग रोम्याप छ है भनेर जाँदाखेरि पनि राजनीति भन्नासाथ यो एजेण्डामा जोडिन आउन गाह्रै छ नेपालीहरु ।
मैले भन्ने गरेको एउटा वास्तविकता के हो भने यहाँ केही गरी यी ठूला दलहरुले संघीयता उल्ट्याउने निर्णयमा पुगेछन् भने पनि चित्रबहादुर केसीले चुनाव हार्नुहुन्छ । संघीयता चाहिँदैन भन्ने पेटेन्ट राइट त चित्रबहादुर केसीसँग छ नि । कमल थापाजीहरुसँग भन्दा पनि उहाँसँग छ । तर, हाम्रो राजनीतिको स्वरुप यस्तो छ कि भोलि कथंकदाचित संघीयता भएन छ भने पनि चित्रबहादुरले चुनाव हार्नुहुन्छ । जस लिने यिनै ठूला दलहरु नै हुन्छन् ।
वैकल्पिक शक्ति निर्माणका प्रयासहरु
हामीले हेर्ने हो भने ०४७/०४८ सालतिर डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले नयाँ पार्टी (लोक दल) सुरु गर्नुभएको थियो । त्यतिखेरको एमाले र नेपाली कांग्रेसको शैली हेर्दा डा. पाण्डेलाई के आँकलन गर्न गाह्रो थिएन भने यो शक्ति सत्तामा आयो भने यसले देशलाई २०/३० वर्षपछि कता लैजान्छ । यो बुझ्न उहाँलाई गाह्रो थिएन र उहाँले लोक दल नामको नयाँ पार्टी खोल्नुभयो ।
तर, उहाँलाई पो सबै कुरा थाहा थियो र फ्रस्टेसन थियो त, जनता त कांग्रेस र कम्युनिष्टप्रति उत्साहित नै थिए । त्यसैले डा. पाण्डेको फ्रस्टेसन र जनताको उत्साहले म्याच खाएन र उहाँको नयाँ पार्टी बनाउने अभियान सफल भएन ।
अहिले हामीले बनाएको साझा पार्टी, विवेकशील वा डा. भट्टराईसम्म आइपुग्दा हामीले कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुले जतिसुकै बहुमत ल्याए पनि देशमा निकास निस्कँदैन भनेर नयाँ पार्टी सुरु गरेका हौं ।
जतिबेला हामीले पार्टी लञ्च गरेका थियौं, त्यतिबेला मिडियाका साथै वौद्धिक व्यक्तित्वको साथ थियो । तर, गएको चुनावमा जनता कांग्रेस र कम्युनिष्टप्रति निराश भएनन् । उनीहरु झन् वामपन्थी मिलेपछि उत्साहित भए । झन् उल्टो उनीहरुलाई नै दुई तिहाई दिए ।
चुनाव भएको अब जुन २ वर्ष हुन लाग्यो । अहिलेको अवस्था के हो भने नेपाली जनता यति असहाय र आक्रोशित, फ्रस्टेटेड र निराश २००७ सालयता भएकै थिएनन् । ’cause, जनताले उसबेला एउटा आश गर्ने ठाउँ छाडेका थिएनन् । पञ्चायत निरंकुश थियो, बहुदल आएपछि केही होला भनियो । ०६२/०६३ मा माओवादी आएपछि माओवादीलाई मत दिएका हुन् नि जनताले । यत्रो उत्षर्ग गरेर आएकाले केही न केही परिवर्तन गर्छ होला, कांग्रेस र एमालेजस्तो हुँदैन होला भनेर माओवादीलाई मत दिएका हुन् जनताले ।
फेरि पछिल्लोचोटि वामपन्थीहरु मिले । वामपन्थी समर्थक जनतामा सधैं के थियो भने यी वामपन्थी फुटे, यिनीहरु एक भएर एकमना सरकार बनाउन सके भने त गर्छन् भन्ने थियो । तर, अहिले त्यो पनि पटाक्षेप भयो ।
गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै हो
रवि लामिछानेको अहिले जुन छवि बनेको छ, यसमा राजनीतिमा जानेवित्तिकै सामान्य भ्रष्टाचार र विसंगतिका विरुद्धमा क्रियाशील हुन्छु भन्नु र राजनीतिक टोपी लगाएर राजतन्त्र अथवा अरु कुनै राजनीतिक मुद्दाहरुमा मुख खोल्न उहाँजस्तो व्यक्तित्वले निकै सोचविचार गर्नुपर्छ ।
त्यसैले अहिले जसरी धमिलो पानीमा माछा मार्ने र यो व्यवस्था नै उल्टाउने भन्ने तहको जुन एकथरि अलिकति चाहिनेभन्दा बढी उत्साहित भएका छन्, त्यो समूहले पनि जान्नुपर्ने कुरा के हो भने यहाँको राजतन्त्र आफ्नै कारणले गएको हो ।
राजतन्त्रको विकल्प भनेको ०५८/०५९ सालमै फेल भइसकेको अप्सन हो । गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै हो । हाम्रो अहिलेको गणतन्त्रमा केही समस्याहरु छन् । तर, यसको विकल्प यो भन्दा पछाडि गएर अर्को कुनै पनि तन्त्र हुँदैन । यसको विकल्पमा हामीले योभन्दा उन्नत नै खोज्नुपर्छ ।
हुन त अहिले एकथरिको भनाइ के छ भने राष्ट्रपतिको अफिस दलीय हुने भयो, त्यो मर्यादित भएन । त्यसो हो भने त्यसलाई मर्यादित बनाऔं न । यो कुनै गाह्रो कुरो छैन । त्यसलाई मर्यादित बनाउन सकिन्छ । तर, गणतन्त्रकै विकल्प खोज्ने भन्ने कुराले न मुलुकलाई त्यसले भलो गर्छ, न त्यसको पछि लाग्ने शक्तिलाई भलो गर्छ ।
अहिलेको विसंगतिको विकल्प योभन्दा उन्नत विकल्प हुनुपर्छ । अब हामीले त्यही उन्नत विकल्प खोज्ने हो । अहिले कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीभित्रका नेताहरुले अपनाएको संस्कारको विरोध हुनुपर्छ । तर, अहिले राजावादी भनिएका शक्तिहरु पनि चन्द्रमाबाट टप्किएका त होइनन् । हामीले उहाँहरुको विगत नदेखेको हो र ? अहिले राजालाई पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरु सत्तामा हुँदा के-के गरेका थिए, नेपालीले नदेखेको हो र ? त्यति सर्ट मेमोरी छ र हाम्रो ? त्यसैले हामी एकदमै सतही लोकप्रियतामा बग्नुहुँदैन ।
अब रवि लामिछानेजीजस्तो व्यक्तित्वले यस्ता कुराहरुमा राजनीतिको भुइँमा बसेरै हेर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा क्षणिक लोकप्रियतामा बहकिएर त्यो तहसम्म यो राजनीति अगाडि जाला भन्ने मलाई लाग्दैन ।
रवि लामिछानेको पक्षमा देखिएको जनमतले नेपाली जनता कांग्रेस र नेकपाको विकल्प खोज्न लालायित छन् भन्ने देखाएको छ । तर, गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै हो ।
(साझा पार्टीका प्रवक्ता डा. आचार्यसँग कुराकानीमा आधारित)(अन्लाईनखबर )
पुराना पेजहरु महिना छान्नुहोस् अक्टोबर 2021 (29) सेप्टेम्बर 2021 (37) अगस्ट 2021 (40) जुलाई 2021 (32) जुन 2021 (37) मे 2021 (32) अप्रील 2021 (19) मार्च 2021 (32) फ्रेवुअरी 2021 (37) जनवरी 2021 (31) डिसेम्बर 2020 (36) नोभेम्बर 2020 (26) अक्टोबर 2020 (4) सेप्टेम्बर 2020 (30) अगस्ट 2020 (26) जुलाई 2020 (26) जुन 2020 (11) मे 2020 (14) अप्रील 2020 (7) मार्च 2020 (30) फ्रेवुअरी 2020 (50) जनवरी 2020 (55) डिसेम्बर 2019 (69) नोभेम्बर 2019 (49) अक्टोबर 2019 (55) सेप्टेम्बर 2019 (59) अगस्ट 2019 (62) जुलाई 2019 (67) जुन 2019 (73) मे 2019 (46) अप्रील 2019 (14) मार्च 2019 (21) फ्रेवुअरी 2019 (55) जनवरी 2019 (67) डिसेम्बर 2018 (71) नोभेम्बर 2018 (38) अक्टोबर 2018 (28) सेप्टेम्बर 2018 (55) अगस्ट 2018 (52) जुलाई 2018 (63) जुन 2018 (77) मे 2018 (72) अप्रील 2018 (73) मार्च 2018 (58) फ्रेवुअरी 2018 (60) जनवरी 2018 (64) डिसेम्बर 2017 (75) नोभेम्बर 2017 (74) अक्टोबर 2017 (73) सेप्टेम्बर 2017 (71) अगस्ट 2017 (85) जुलाई 2017 (87) जुन 2017 (72) मे 2017 (47) अप्रील 2017 (66) मार्च 2017 (55) फ्रेवुअरी 2017 (53) जनवरी 2017 (54) डिसेम्बर 2016 (43) नोभेम्बर 2016 (81) अक्टोबर 2016 (73) सेप्टेम्बर 2016 (88) अगस्ट 2016 (89) जुलाई 2016 (86) जुन 2016 (77) मे 2016 (83) अप्रील 2016 (88) मार्च 2016 (114) फ्रेवुअरी 2016 (110) जनवरी 2016 (85) डिसेम्बर 2015 (81) नोभेम्बर 2015 (76) अक्टोबर 2015 (94) सेप्टेम्बर 2015 (95) अगस्ट 2015 (97) जुलाई 2015 (93) जुन 2015 (92) मे 2015 (100) अप्रील 2015 (106) मार्च 2015 (99) फ्रेवुअरी 2015 (60) जनवरी 2015 (58) डिसेम्बर 2014 (96) नोभेम्बर 2014 (106) अक्टोबर 2014 (110) सेप्टेम्बर 2014 (103) अगस्ट 2014 (96) जुलाई 2014 (83) जुन 2014 (95) मे 2014 (89) अप्रील 2014 (110) मार्च 2014 (103) फ्रेवुअरी 2014 (96) जनवरी 2014 (109) डिसेम्बर 2013 (100) नोभेम्बर 2013 (90) अक्टोबर 2013 (105) सेप्टेम्बर 2013 (134) अगस्ट 2013 (117) जुलाई 2013 (125) जुन 2013 (110) मे 2013 (121) अप्रील 2013 (130) मार्च 2013 (121) फ्रेवुअरी 2013 (108) जनवरी 2013 (124) डिसेम्बर 2012 (122) नोभेम्बर 2012 (121) अक्टोबर 2012 (119) सेप्टेम्बर 2012 (142) अगस्ट 2012 (159) जुलाई 2012 (161) जुन 2012 (164) मे 2012 (187) अप्रील 2012 (148) मार्च 2012 (177) फ्रेवुअरी 2012 (123) जनवरी 2012 (111) डिसेम्बर 2011 (137) नोभेम्बर 2011 (164) अक्टोबर 2011 (176) सेप्टेम्बर 2011 (174) अगस्ट 2011 (202) जुलाई 2011 (179) जुन 2011 (199) मे 2011 (229) अप्रील 2011 (245) मार्च 2011 (279) फ्रेवुअरी 2011 (250) जनवरी 2011 (252) डिसेम्बर 2010 (183) नोभेम्बर 2010 (138) अक्टोबर 2010 (220) सेप्टेम्बर 2010 (253) अगस्ट 2010 (390) जुलाई 2010 (256) जुन 2010 (210) मे 2010 (220) अप्रील 2010 (166) मार्च 2010 (229) फ्रेवुअरी 2010 (131) जनवरी 2010 (207) डिसेम्बर 2009 (152) नोभेम्बर 2009 (141) अक्टोबर 2009 (103) सेप्टेम्बर 2009 (92) अगस्ट 2009 (157) जुलाई 2009 (130) जुन 2009 (89) मे 2009 (172) अप्रील 2009 (62) मार्च 2009 (50) फ्रेवुअरी 2009 (25) जनवरी 2009 (48) डिसेम्बर 2008 (77) नोभेम्बर 2008 (62) अक्टोबर 2008 (25) सेप्टेम्बर 2008 (21) अगस्ट 2008 (3) जुलाई 2008 (2) जुन 2008 (2)
माउण्ट एभेरेष्ट स्पोर्टिङ क्लव काठमाण्डौ-कुवेतको २०औं बार्षिकत्सव तथा ८औं अधिबेशको तयारी पुरा।
खोटाङ कुवेत सम्पर्क मञ्चको परिचय तथा उद्देश्य